Tahaka ny maha zavadehibe azy ny filazana momba ny fitoviana ny demokrasia ary | Course Hero
Liberty Democracy and Equalit3.docx
Tahaka ny maha zavadehibe azy ny filazana momba ny
School Kirinyaga University College
Course Title BUSINESS 0024055
Uploaded By symofreelancer
tany. Tahaka ny maha-zavadehibe azy, ny filazana momba ny fitoviana, ny demokrasia ary ny fahalalahana dia toa tahaka ny antso na fanomezan-toky ny fahalalahana. Na izany aza, nanamarika i Berlin (2017) fa tsy ny fahalalahana ny maha-olombelona. Ny antony hafa dia manan-danja toy ny fiarovana, ny fandriam-pahalemana ary ny fomba fiasa. Berlin (2017) koa dia manambara fa ny fahalalahana loatra dia mety hampiakatra ny hafa hanaisotra ny mpiara-belona aminy ny fahaleovan- tenany, tahaka ny maha-izy azy amin'ny fitrandrahana be loatra dia hanimba ny tontolo iainana. Noho izany, ny ideolojia momba ny "Conceptions de Liberté" ao Berlin dia natao hanasongadinana izany, tahaka ny natiora ny faritra tsirairay dia manana fahafahana mitovy ary sehatra mitovy amin'ny fampiasana sy hizara ny loharanony mba hahazoana ny tanjany tsara indrindra mba hahazoana ny fepetra takian'ny olombelona ny fifandanjana eo amin'ny fahafahana sy ny fitoviana. Ny fitsipiky ny natiora dia tokony ampiharina amin'ny lalao politika sy fitantanana. Ny politika sy ny fitantanam-panjakana dia miompana amin'ny filàna fanatsarana ny filaminana satria miaro ny fahalalahan'ny olom-pireneny izany (Berlin, 2017). Ny governemanta dia vondrona iray na fikambanana iray izay omen'ny olona ny andraikiny. Mampihatra ny politika izany, izay mametraka tetikady izay natao hanaraha-maso ny tanjon'ny fitondrana mifehy (Salomon, 2018). Amin'izao fotoana izao, ny ankamaroan'ny firenena dia manome voninahitra ny fahalalahan'ny safidin'ny olom-pireneny amin'ny alàlan'ny famelana azy ireo hifidy ny mpilatsaka hofidiana.
manan danja aza ireo singa ireo ny andraikitra manohitra ny fanondranana olona
BUSINESS 111 - Spring 2016
plastika spider planks takela tongotra tokana no manamboatra planks sy hantsana
HEALTH SCI 400 - Spring 2016
ENGL ENGL101 - Spring 2010
Mihevitra ho manana ho π dia ampy differentiable asa dia manana ny Taylor
FINA 4160 - Fall 2015
Create your own adventure.docx
Tana Travel LOG .docx